version 0.6.3 – GetText ပေါင်းစည်းရေး
စက်တင်ဘာလ 1, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 14 comments
ဒီဗားရှင်းသစ်ကိုထည့်သွင်း bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ၏အဓိကအပြောင်းအလဲများနှင့်စာရေးရှိပါတယ်.
အရေးအပါဆုံးပြောင်းလဲမှု WordPress ကို GetText စနစ်ဖြင့် plugin ကို၏ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ပါတယ်, လမ်းကို WordPress ကိုအရာဖြစ်ပါသည် (နှင့်အချို့သောအဓိကအကြောင်းအရာများနှင့် plugins ကို) မိမိတို့ဒေသတွင်းဗားရှင်းပေး. ဒီဖိုင်တွေရဲ့မောင်နှံစုံနှင့်ပြု (ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ extensions တွေကိုခေါ်ဝေါ် .po / .mo ဖိုင်များ) ကြောင်းကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းထားသောကြိုးတစ်ဦးစာရင်းတွင်ပါဝင်.
အဘယ်အရာကို Transposh ယခုမဖိုင်များကပြောပါတယ်အသုံးချရန်ရန်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်စပိန်မှ WordPress ကိုဘာသာပြန်ဆိုဖိုင်များရှိပါက, သူတို့ဦးစားပေးလိမ့်မည်နှင့် Transposh စပိန်မှ interface ၏ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါဖိုင်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်. အဘယ်ကြောင့်ဤသည် သာ. ကောင်း၏? အနည်းငယ်အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်, တစ်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကယခင်ကမဖြစ်နိုင်ဘယ်မှာရှိဘာသာပြန်ချက်များကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ခြင်းဖြစ်သည်, အခြားဘာသာပြန်တဲ့လူ့အခြေခံပြီးနှင့်ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်သည်ဟုယူဆရသည်ခြင်းဖြစ်သည်, နောက်ဆုံးကအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောလအမည်များနှင့်နေ့ရက်ကိုအတိုကောက်အဖြစ်အတိုညှို့အတွက်မရေမရာရှိဆဲရှင်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်.
ထို .po / .mo ဖိုင်များကိုရရှိရန်အဘယ်မျှ, ဤလုပ်ငန်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို http://trac.transposh.org/wiki/UsingGetText.
ဒီ feature လည်း plugin ကို၏ In-့ Cache memory စနစ်၏ rewritable ပါဝင်သည်, ယခုသောအထောက်အကူများကို xcache နှင့် eaccelarator ယခင်ဗားရှင်းအပြင် APC ထောက်ပံ့. ဒီဗားရှင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးထက်ပိုသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းကိုယ်စားပြုမှုကိုအသုံးပြုသည်နှင့် memory usage ကိုလျော့ချပေးနိုင်.
ထို tag cloud ကနေ Tags: ယခုဘာသာပြန်ဆိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အတူဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်
ထို sneaky များအတွက် Fix “မခိုင်လုံတဲ့ plugin ကို header ကို” ထုတ်ပြန်သည်, သင်တို့သည်ရမည်ဆိုလျှင် “ပျက်ကွက်” သင့်ရဲ့ widget ကရွေးချယ်ရေး setting တွင်နှစ်ကြိမ်စာရင်းသွင်း, အရှိဝစ်ဂျက် / tpw_deafult.php file ကို delete ကျေးဇူးပြုပြီး
ဘာသာပြန်ချက်ရလဒ်တစ်ခုအပိုအာကာသကိုထည့်သွင်းဖို့စိတ်သဘောထား translate ဖြင့် MS များအတွက် Fix
အလံ၏အမြင်ကာကွယ်ပေးနိုင်အလံများ css ကို widget ကအတူစာရင်းနှင့်အတူပုံသေ bug ကို
ငါတို့သည်သင်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစာကျွေးပြီးပိုစစ်မှန်အချိန်ဖက်ရှင်အတွက်အပြောင်းအလဲကြည့်ရှုနိုင်အောင်လည်းဒီ site ကို layout ကိုနည်းနည်းပြောင်းလဲပြီ.
Update ကို: ရှိရင်းစွဲ Cache မပါဘဲ plugin ကိုအသုံးပြုသည့်အခါတစ်ဦးက bug ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့, သင်ကျော့ဘာသာပြန်ချက်များကိုရှိပါက, သို့မဟုတ်သင်ဘာသာပြန်ချက်များကိုယခင်က လုပ်. မမြင်နိုင်, wordpress.org ကနေ plugin ကို reinstall ကျေးဇူးပြုပြီး, plugin ကိုယခုပုံသေလည်းမရှိ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နစ်ကိုးလပ်စ ဒီအစီရင်ခံ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: အထွေထွေမက်ဆေ့ခ်ျများ အတူ Tagged: APC, Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, eaccelarator, gettext, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin, xcache
Arle Uein ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 3, 2010 တွင် 12:03 ညနေ
ငါအသစ်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူသစ်တစ်ခု bug ကိုရှိ (0.6.3) နှင့် plugin ကို Mailpress. ကျနော်တို့ page ရဲ့ဘာသာပြန်တစ်ခုပြချင်လာတဲ့အခါ, မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိပါတယ် :
သတိပေးခြင်း: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Entity အတွက်မှတ်ပုံတင်မထားတဲ့ error message ကို, လိုင်း:4လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် 7
သတိပေးခြင်း: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ဟာမမှန်ကန်ချာလိတ်တန်ဖိုးကို 1 Entity အတွက်, လိုင်း:4လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် 7
သတိပေးခြင်း: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: PCDATA ဟာမမှန်ကန်ချာလိတ်တန်ဖိုးကို3Entity အတွက်, လိုင်း:4လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် 7
သတိပေးခြင်း: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: sequence '']]>’ Entity အတွက်အကြောင်းအရာအတွက်ခွင့်မပြု, လိုင်း:4လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် 7
သတိပေးခြင်း: DOMDocument::loadXML() [domdocument.loadxml]: Entity အတွက်စာရွက်စာတမ်းရဲ့အဆုံးမှာပြည်တွင်းရေး errorExtra အကြောင်းအရာ, လိုင်း:4လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် 7
fatal error: အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး function ကို hasAttributes ဖို့ Call() လိုင်းပေါ် /wp-content/plugins/mailpress/mp-includes/class/MP_Xml.class.php အတွက် non-အရာဝတ္ထုအပေါ် 50
စက်တင်ဘာလ 6, 2010 တွင် 11:31 ညနေ
ငါ plugin ကို install လုပ်ပြီးနှင့်ပဋိပက္ခမမွငျနိုငျ, ငါတစ်နေရာရာမှာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခန့်မှန်း.
အဆိုပါပဋိပက္ခ Transposh gettext သို့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလမ်းဖြင့်စေ (သူတို့အား char ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်) ပုံမှန်အားဖြင့်သင်ဖော်ပြနေသောပဋိပက္ခဖြစ်ပျက်မနေသင့်.
စက်တင်ဘာလ 13, 2010 တွင် 7:55 ညနေ
သင်တစ်ဦး option ကိုထည့်ပါစေခြင်းငှါ “gettext ပေါင်းစည်းမှုကို disable” …
စက်တင်ဘာလ 13, 2010 တွင် 10:06 ညနေ
အက်ဒဝပ် Mugits ကပြောပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 5, 2010 တွင် 5:45 ညနေ
ငါမြင်သောအရာကိုကိုချစ်ဒီမှာဖတ်, အကောင်အထည်ဖော်မယ့်နည်းပညာပိုင်းမတတျနိုငျ. ငါ၏အကော်ဖီ site ကိုဘာသာပြန်ချက်တွေအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် WP နဲ့ဒီ plug-in ကိုမှ updated ရှိသည်ဖို့အဆင်သင့်ရယူခြင်းငါ့အဘို့မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်. ဘာသာပြန်ထားသောသောအခါ,, ဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့စာမျက်နှာခဲ့ကြသော်လည်းအဖြစ်ကစာမျက်နှာကို update နှင့် populate လိမ့်မည်? ငါရခဲ့မယျဆိုရငျ 20 အင်္ဂလိပ်နှင့် Japanese သို့ဘာသာပြန်ထားသောအတွက်စာမကျြနှာ, ကိုယ့်အနေနဲ့အမှန်တကယ်စာမျက်နှာဖန်တီးယခုအခါတိုက်ရိုက်စာမျက်နှာအဖြစ်မကယ်နှင့်အပြည့်အဝ meta optimization enable လုပ်ဖို့ဘာသာပြန်ထားသောစာမကျြနှာကိုသုံးနိုင်မည်?
ငါ website တစ်ခုပြုမိလိုအပ်ပါတယ်ငါသည်ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းချင်, ဒီကိုးကားဖို့ avialable ဘယ်သူ့ကိုမှ?
စက်တင်ဘာလ 6, 2010 တွင် 11:29 ညနေ
အဆိုပါဘာသာပြန်ထားသောစာမကျြနှာမဆိုလက်တွေ့ကျသောရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကယ့်စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုအပြည့်အဝ meta optimization အားဖြင့်အတိအကျအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါဆက်ဆက်ကအလုပ်လုပ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
စက်တင်ဘာလ 9, 2010 တွင် 11:10 နံနက်
(ငါ၏အ english ဘို့တောင်းပန်ပါတယ်)
ငါ၏အအရောင်ကို web များအတွက်ကိုယ့်ကို default အားပိုလနျဘာသာစကား ထား.. အခြားမှ lang ပြောင်းလဲနေတဲ့သောအခါ,, ဒီ lang ခေါင်းစဉ်ဝစ်ဂျက်အားဘာသာပြန်ထားသောရ “ဘာသာပြန်ချက်” နဲ့ options “default ဘာသာစကားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ” နှင့် “Edit ကိုဘာသာပြန်စာပေ”
ဥပမာ. Deutsh များအတွက် > ဘာသာပြန်ချက်, default ဘာသာစကားအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ပိုလနျပြောင်းသောအခါ (ငါ့အကို default lang) ဒီစာသားကိုအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ပါသည်, အရောင်မ. 🙁
default အနေနဲ့ english ထက်အခြားလျှင်အဘယ်ကြောင့် defalut lang အဘို့အဝစ်ဂျက်ဘာသာပြန်ချက်ပျောက်ဆုံး?
စက်တင်ဘာလ 14, 2010 တွင် 10:51 ညနေ
ဒါဟာလာမယ့်ဗားရှင်းချိန်းပါလိမ့်မည် (0.6.4) မကြာမီ
စက်တင်ဘာလ 20, 2010 တွင် 3:04 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, ငါနျော nb_NO နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်. buddypress အတွက်လှုပ်ရှားမှုသာပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားမှုအဘို့အဘာသာပြန်ထားသောရရှိ, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားလှုပ်ရှားမှုအင်္ဂလိပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ…မဆိုအိုင်ဒီယာ?
စက်တင်ဘာလ 20, 2010 တွင် 3:26 ညနေ
စက်တင်ဘာလ 20, 2010 တွင် 3:38 ညနေ
တကယ်တော့ဒါဟာမဆို .mo ဖိုင်တွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောဘာသာစကားင်. ငါအလွတ်စာမျက်နှာရ…
စက်တင်ဘာလ 22, 2010 တွင် 11:38 နံနက်
မင်္ဂလာပါ, က virtual host ကို configuration ကိုအတွက်, ငါ့အကို web အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ php_admin_value memory_limit တိုးမြှင့် 128 နှင့်ယခုကအလုပ်လုပ်တယ်… ဒါကြောင့်သင်ျာခဲ့ကြ, တကမှတ်ဉာဏ်ပြဿနာခဲ့သည်! သင့်ရဲ့အကူအညီကို THX!
စက်တင်ဘာလ 24, 2010 တွင် 12:53 နံနက်
စက်တင်ဘာလ 24, 2010 တွင် 8:54 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့, နောက်တဖန် THX!
ငါဆဲသော်လည်းပြဿနာတစ်ခုရ, ငါ buddypress ဘာသာစကားဖိုင်များရှိရသောအခါ…ဥပမာအားနော်ဝေးမှာတော့, ကိုသာပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားမှုဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်, ကြွင်းသောအရာမဟုတ်ပါဘူး…မည်သည့်စိတ်ကူးများ?
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [c4740c0]: ဟုတ်ကဲ့, ကျွန်တော်တို့ဟာပြောင်းလဲမှုအပေါ်လည်း Yandex proxy ကိုကောင်တာကို reset သင့်တယ်. ဒီဇင်ဘာလ 5, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [2fb9f69]: wordpress5ရန်ပစ္စည်းပစ္စယ post မှ wp-JSON ကိုအသုံးပြုသည်, ကျွန်တော်မှမကြိုးစားသင့်ပါဘူး ... နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset : PHP ကို 7.2 ကန့်ကွက်ခံထား create_function, ဒါကြောင့်ဒီအယခုအမည်မသိဖြစ်ပါသည် ... နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset : PHP ကို 7.3 တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းရှိပါတယ် - preg အသုံးအနှုန်းတွေထဲမှာ char, အတွက်ဒါ ... နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
Transposh-wordpress အတွက် Changeset [d4911aa]: Bing မှဂုကဆက်ပြောသည် နိုဝင်ဘာလ 23, 2018
ကမ်းလှမ်းမှု အပေါ် version 1.0.3 – သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့ပါနဲ့?
Fabio အပေါ် version 1.0.3 – သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပို့ပါနဲ့?
ကျယ်ပြန့်သမုဒ်ဒရာ အပေါ် version 1.0.0 – အချိန်ရောက်လာပြီ